Murti Dahsoon oo Macne Badan: October 2007
(Waraysiga Sanadka… Rayaalow Runta Sheeg. Qayb. 2aad)
S.....Wa calaykum asalaam. M/weyne waad yar raagtay. Markii horena sibaad u yar ruqruqaansanaysay markaan su’aalaha qaar kuweydiiyo oo waxaaba iigu soo dhacday waar malaa sooba noqon maayee meesha iskaga tag.
Waa goor dambe ee aan su’aalaha ku noqdo.
Ciidankii Qaranku waakan qabsaday Laascaanood isagoo adeegsanayaa taageerada beelaha degaanka ah qaarqood. Hambalyo ayaan ku leeyahay. haddaba ma u deynaysaa ciidanka goobahaa ay joogaan mise iminkaad sidaadii soo raraysaa oo haddana Oog ku soo celinaysaa?
J. Horta Ciidanka iyo dadweynaha reer Sool ee taageeray iyo dhammaan umadda reer Somaliland waan ku hambalyaynayaa guusha Ilaahay siiyay iyo sida geesinimada leh ee ay u dagaalameen.
Tan soo celinta ciidanka marlay waxaanu eegaynaa duruufaha jira laakiin inaanu xuduudda dalka sugno way naga go’antay oo waan tagaynaa haddii eebbe idmo ayaan leeyahay anigu. Waan tagi doonaaa.
S. Doorkan Wasiirka Gaashin dhigga ma ku tidhi ha xidhin taleefanka (mobilka) yaan ku eryine?
J. Taliyihii Ciidanka Qaran, Nuux, baa jooga furinta (front).
S. Haddaa wasiirka uma baahnide. Ina Bullale, Xoghaya Guud ee UDUB, wuxuu yidhi ciidanka Somlaliland waa 40,0000. Ma runtiibaa oo tiradii ciidanka waa la sugay mise sir baa ka fakatay oo caaglahii buu ku daray?
J. Tirda Ciidanka Qaranku waa sir dalka u qarsoon inaan sheegnana ma rabno.
S. (Awalba Ina Bullaale cidi ma rumaysan jirine.) Oo qiiqan inoo soo galay muxuu ahaa?
J. Dumarkii baa ciidankii sabaayad u dubaaya baan filayaa iska wado su’aalahaaga adigu.
S. Haye.Haye. Madaxweyne bei dhexdaasa oo aad safar debedda ugu baxday waxaad sheegtay inaad Talyaaniga albaab ka soo furtay. Duqsina ha ahaadee inna wax albaabkii ka soo baxaya ama sii gelaya ma la hayaa?
J. Waa runtaa inaan albaab ka soo furay Talyaaniga waan sheegay bay ahayd oo casuumad baan ka helay bay ahayd. Anigu waajib kelihaata baan is faray. Waajibkaasi inaan qadiyadeena caalamka gaadhsiino weejaan. Yaah. Taas ayaa nagu kallifaysa. Waayo dal aan meella laga ictiraafsanayn baan nahay.
S. Albaankii Kenya?
J. Sidoo kale.
S. Albaabkii Ugaandha?
S. Albaabkii Ruwanda?
S. Albaabkii Ghana?
J. Sidoo kalae
S. Albaabkii Norway?
S. Albaabkii Germany?
S. Dee maystiddhi M/weyne meesha waad nagu waalaysay ee waxaad soo furtay ma jiraan? Miyaanad Ilaahay ka yaabayn?
J. Waan kaaga jawaabay su’aalaha. Ka soco. Iska dhaaf ilaaqda.
S. (Waar Bilayskaabu noogu yeedhi) Waayahay M/weyne halkaasaan albaabadii inagaga xidhay dabayshooda eh, haddaa dalka ku soo noqdo. Maxaad qorshe shaqo abuuris ah u haysaa dhallinyadan kumanaanka ah shaqo la’aanta iyo rajo la’aanta la dhooban suuqyada?
J. Horta dee anigu waxba ka hagran maayo. Anigu ictiraafka ayaan xoogga saaray illaa ictiraaf la helona shaqo la heli maayo. Markaa ha iska samraan dee. Ha iska sugaan baan ku talin lahaa anigu.
S. M/weyne idaacaddii cusbayd ee la filayyay shanta sanno halkay ka dhacday? Yayse ku maqantahay?
J. Hortan aan mid kuu sheego. Idaacaddii nimankii aan ka iibsannay ayay weli ku maqantay. Kolkaan Ina Cabdi Dacar (danjiraha S/L ee Belgium) weydiiyayna. Wuxuu yidhi nimankii waxba weli inooma hayaa. Markaan waagii dhoweyd ee an norway tegey ayaan ku idhii bay ahayd. Dee maan nimanka ashkatayno? Waanse helaynaa idaacada. Anigaa ku idhi. Waan keenaynaa.
S. Doorashadii waatan dib loo dhigay. Adigu ma isa soo sharraxaysaa doorka?
J. Maxaa iga hortaagan haddaan isasa soo sharraxo?
S. Dee moojidaada. Ma warbaan kuu hayaa anigu adigaan wax ku weydiiyaye? Waxaanse ku weydiiyay maxaad doorka dadka ku odhanaysaa igu doorta ka dib markaa lix sanno M/weyne ahayd ee aanad ummadda waxba u qaban?
J. Umadda iyo dalkaba waan u qabtay. Mishkiladu waxa weeye waxii aan qabanay baanaan umadda u sheegin bay ahayd. Haddase waan u sheegaynaa.
S. M/weyne Xisbi waliba wuxuu ku dhaqmaa qorshe uu ku guulaysto oo codad ku helo oo u gaar ah. Xukuumaddaada iyo xisbigeeda waxa qorshe u ahaa kala qaybinta beelaha. Gaar ahaan Isaaqa oo aad dagaaladii sokeeye boogtoodii ku kala fogayn jirteen. Beelaha qaar oo aad ku beerlaxawsan jirtay inaad ka dhalatay iyo qaar kale oo aad uga sheekayn jirtay xidhiidho taariikhi ah oo idinka dhaxayn jiray. Wixii oo dhan waa laga ilbaxay waanaga la heshiiyay oo adiguna inaad daayac tahay baa laguu arkay. Maxaad dadka ku qancinaysaa?
J. Muwaadin kasti xaq buu u leeyahay in uu doorasho u cararo. Waanan waydiisanaynaa dadka codkooda anagaana naqaan sidaan u helayno. Haye. Taageero igu fillana marlay waan haystaa. Umaddana in jahawreeriyo oo been loo sheego maaha. Dalkana inaan kal jiidanno oo gobolba meel u goyno maaha. Waxa hareeraheenna ka dhacaaya in la eegoo weejaan.
S.(muwaadin kasti kuwa Qaran mooyaane muu iska yidhaahdo) M/weyne waxa suuqa laguu geliyay inaad tahay bakhayl labaduba duuban yihiin oo geedka Tiinka la yidhaa ee aan biyo iyo baad toona u baahnayn ee laamiyada iyo dhagaxa sallaxa ah hadduu doono ka baxa haddaad adigu beerto wuu qallallaa ee maxaa ka jira.? Ma waxa dhagax sallax uu ka helayo ayaad uga liidan lahayd?
J. Hammaan anigu Tiinba beeray bay ahayd? Been rakhiisa iyo dacaayad weeji. Anigu kollay is faanin maayo laakiin aduunka qof aan wax bixini ma jiro.
Madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantay fursadda aad i siisay iyo dulqaadka aad muujisay.
Halkaa markaan marayo ayaaan toosay.
Posted by Daljir at 7:03 AM 1 comment:
Posted by Daljir at 7:01 AM No comments: